कोरोनाले ३ दिनमा ३ भाइको निधन, घटना सुनेर दिदीको पनि मृत्यु ! – Khabar Patrika Np
कोरोनाले ३ दिनमा ३ भाइको निधन, घटना सुनेर दिदीको पनि मृत्यु !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०६, २०७८ समय: १२:३६:०९
काठमाडाैं । मुस्लिम समुदायमा एक महिने इदुल फित्र ९इद०को पवित्र रोजा चलिरहेको थियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ३ सदरलाइन (सुनार मण्डी) का सहोदर तीनभाइलाई रोजाकै बेला कोरोना संक्रमण भयो र ज्यान गयो। स्व।नजिर अहमद हल्वाई र फातिमा बानुका ७ भाइ छोरामध्ये काइलो ४८ वर्षका इम्तियाज अमहद, राइलो ४६ वर्षका एजाज अहमद र ४१ वर्षका कान्छो जहिर अहमदले ३६ घण्टाको अन्तरमा भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाए।
यही कोलोनीमा ७ भाइका छोराछोरी, नातिनातिना गरी ३५ जनाको परिवार बस्छ। सदरलाइनमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएको यो परिवार सुनारमण्डीमा भने १२ वर्षअघि सबैै भाइको एउटै थलोमा घर बनाएर बस्न थालेको थियो। मंगलबार अपराह्नतिर संवाददाता पुग्दा यो बडेमानको घर पनि सुनसान थियो। मृतकका भतिजो ९जेठो दाइ हाजी सब्बिरका कान्छा छोरा० सरप्राज मेहमुद मूलद्वारमा भेटिए। उनले दाइ सहनाज आदिल ९माइलो बुवाको छोरा०लाई कुरा गर्न बोलाए। सहनाजले साइलो काका रियाज अहमदलार्ई डाके। ३ तले घरको दोस्रो तलाको उत्तरतर्फको झ्यालबाट उनले हेरिरहे। तल उनी आउन मानेनन्। मात्र चिहाइरहे। संवाददाताले बोलाउँदा पनि उनी तल झरेनन्। पत्रकार भनेपछि बरु झ्यालबाटै कुरा गर्न राजी भए।
‘लगातार एकपछि अर्को भाइको मृत्युु भयो। अहिले त तल झर्न पनि हिम्मत आउँदैन’, उनले पीडा सुनाए’, ‘यो महामारी के हाम्रै घरको लागि भएको हो र रु’ बेला–बेलामा उनको बोली अवरुद्ध हुन्थ्यो। ‘सबै भाइ मिलेर बसेका थियौं। अभाव केही पनि थिएन। आवश्यक परेको बेलामा एकले अर्कोलाई सहयोग गथ्र्यौ। किन हाम्रै परिवारमाथि यस्तो समस्या भयो रु’, ३ भाइ गुमाएका रियाजले भने, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट बचाउन सक्ने सबै प्रयास ग¥यौं। उपचार गर्न पैसाको अभाव पनि हुन्थेन। सबै भाइ मिलेर जति लागे पनि पैसा त जम्मा भइहाल्थ्यो। पैसाले मात्र पनि मान्छे बाँच्ने रहेनछ ?’
सासू–बुहारीको निधन सुनारमण्डीमा मात्र होइन, जिल्लामा कोरोना र त्यसको प्रभावले एकैघरमा दुई वा सोभन्दा बढी ज्यान गुमाउने अरू पनि छन्। खजुरा गाउँपालिकामा सासू–बुहारीले नै ज्यान गुमाए। खजुरा ३ की ७२ वर्षीया खुमकला पुलामीले ११ वैशाखमा भेरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा कोरोनाबाट ज्यान गुमाइन्। त्यसको २ दिनपछि १३ वैशाखमा ४७ वर्षकी बुहारी लक्ष्मी थापा पुलामीको पनि कोरोनाबाटै निधन भएको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुदीप पौडेलले जानकारी दिए। ७ वैशाखमा उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। खुमकलाका पति, नातिनीसहित अरू ४ जनालाई पनि कोरोना भएको थियो। सबै निको भए।
दम्पती नै लग्यो कोरोनाले
त्यस्तै, नेपालगन्ज–५ को बच्चुपुरुवाका २८ वर्षका अशोक मौर्य ९मुराउ०ले कोरोनाबाट ६५ वर्षका पिता रामगोपाल मुराउलाई भेरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा गुमाए। बुबाको मृत्युको १४ घण्टामै ६० वर्षीया आमा सावित्रीदेवी मुराउको पनि मृत्यु भयो। उनी भन्छन्, ‘आमालाई पनि बुबालाई जस्तो कोरोनाको लक्षण थियो तर परीक्षण नै गरेनौं।’ उनको परिवारमा २ दाजुभाइ र ५ दिदीबहिनी छन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ : ३० बजेसम्म बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ सय ५३ पुगेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्न आएका २०९ गरी यहाँका अस्पताल र आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४ सय ६२ पुगेको छ। धेरैले गत चैत महिनायता ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लामा मंगलबारसम्म ७१ हजार ९५५ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा १६ हजार ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जेठ महिना लागेसँगै बाँकेमा संक्रमण दर र मृत्युदर पनि घट्दो क्रममा रहेको ओलीले दाबी गरे। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले समाचार लेखेका छन् ।